अझै किन भूमिगतकाल सम्झिरहन्छन् बाबुराम ? - Jhilko
काठमाडौं । १० वर्षे जनयुद्ध हाँकेको तत्कालिन नेकपा (माओवादी) पार्टी परित्याग गरी नयाँ शक्ति पार्टीबाट उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादीमा लागेका डा. बाबुराम भट्टराईले भने यतिबेला पुरानै युद्धका दिनको सम्झना गरेका छन् ।
जनयुद्ध हाँकेको पार्टी त्यागेपनि सायद बाबुरामको आत्मालाई अझै त्यो पार्टी र त्यसले प्राप्त गरेका उपब्धिहरुको पक्कै मायाँ लागेको होला । त्यसैले त उनी बामपन्थिको साइनो सपेटो चटक्कै भुलेर अर्के बाटो लागिसक्दा पनि जनयुद्धका ती दिनको सम्झना गर्न भने छोड्दैनन् ।
यसै सन्दर्भमा भट्टराइले भूमिगतकालमा आफुले पत्नी हिसिला र छोरी मानुषीसँगै खिचेको तस्वीर भर्खरै समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट गरेका छन् । उनले यो तस्वीर जनयुद्धको सम्झनामा पोष्ट गरेका हुन् या जनयुद्धको तिरस्कारमा त्यो भने उनले प्रस्ट्याएका छैनन् ।
परमाणु युद्ध प्रतिरक्षा बलियो पार्न उत्तर कोरियाली नेताको...
उत्तर कोरियाली समाचार संस्था केसीएनएले नेता किमले सैनिक कमान्डरहरू र सुरक्षा सेवाका...
निस्वार्थ भावले गरिने देशको सेवा भन्दा दुुई नम्वरी धन्दाबाट आएको रकम कहिल्यै ठूलो...